Hayada SDWO Relief oo shalay si fiican u ciidsiisay 6 caruura oo agoon iyo rajay ah oo deeqo lacageed loogu soo hagaajiyey
waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa
Fikirka Akhristayaasha - Click here to publish your own article
Please do not email your article as it will not be published
Habkii Hargeysa SNM ugala Baxday Marxuum C/Laahi Askar 1983kii
Hargeisa 09/08/2013 (SDWO.COM - SomalilandNews.net) Ka dib Ramadan Appeal kii Hayada Samafalka ee SDWO Relief Project ee aanu umada muslimiinta ah ugu soo bandhignay inay ka qaybqaataan qaybaha kala duwan ee aanu ugu talogalnay in lagu gargaaro dadka danyarta ah fadliga bisii barkaysnayd ee Ramadaan. Waxaanu aad ugu faraxanahay in ay isu geyn ahaan ay na soo gaadhay lacag dhan $1140 doolar.
Lacagtan ayaa loogu soo kala deeqay 3 mashruuc oo aanu soo bandhignay bishii Ramadaan.
Lacag dhan $410 dollar waxa loogu soo deeqay barnaamijkii Iftar Ramadan Programme ama afursii Miskiin oo afur loogu samayn jiray si joogta ah 29 qof. Isla markasna waxa laba jeer afur wadareed loogu sameey dadkii masaakiinta ahaa ee ku tukanayey masaajidka xaafada daami.
Lacag dhan $564 dollar waxa loogu soo talo galay mashruucii aan rabnay in lagu ciidsiiyo caruur agoon iyo rajaynimo iskugu darsameen, oo dhar ciideed loo soo iibiyey, maalintii ciidiina la kexeeyay ee la geeyay tukaamada waaweyn ee dadk lacagta lahi cabitaanada ka iibsadaa, waxa kale oo la geeyay goobaha caruuraha maalinta ciida lagu ciidsiiyo ee Kaah.
Waxa kale oo iyaduna na soo gaadhay $166 dollar oo sakaatul fidri ahayd oo iyadan inta raashin lagu soo iibiyey loo qaybiyey dad danyar ah.
Waxaan ilahay uga baryayna intii soo bixisay iyo intii ka qaybqaadatayba inay hawshani suurtogasho inuu ilaahay miisaanka xanaaadka ugu daro, Waxaan ilaahay uga baryayna inuu ilaahay naarta kaga badbaadiyo, waxaan ilaahay uga baryaynaa in halkii ay ka soo qaadeen wax khayr qaba ugu bedelo.
Waxay aheyd Subah hore oo jawigu wacan yahay kadib markii umadu u dareereysay Salaada Ciidal fidriga, waxa si qurux badan ugu soo dareerayey Shaaracyada Magaalada Caruur ku libsan dhar kala midabyo duwan waxaana ka dhex muuqday Caruurta Agoonta ah kuwaas oo dareenkooda farxadeed aan la qiyaasi kareyn.
waayo ciidihii hore waxay ciil iyo cadho la dhex fadhiyi jireen guryaha ay ka degaan magalaada oo ah Buulal iyaga oo dareemi jiray iney ka maqan tahay kaalintii waalidkood kadib markay arkaan caruurta filkooda ah oo la daadihinayo qaarkoodna lagu wado gawaadhida kala duwan balse maanta waxaa taas ka badbaadiyey Alle swc oo u soo diray dad muxsiniin ah oo qurbaha iyo gudahaba jooga. waxyaabaha aadka raad kuugu reebaya waxaa ka mid ahaa marka caruurta la geeyo goobaha Ciyaaraha iyo xayawaanada ayey ku odhanayee qofka wada ee hagaya Adeer Ciidihii hore maanu arki jirin Farxadan oo kale, waxay dalbanayeen cunto, sharaab, shoping wax kasta oo ay u baahdaan iyada oo loo hayey lacag aad u badan oo gaar ay u leeyihiin.
Waxaana loo dalxiis geynayey goobaha ugu nololsha qaalisan magaalada gaar ahaan hotelada waaweyn ee dadka wax haystaa isugu yimaadaan. Caruurta oo tiradooda guud dhameyd 6 Caruur ah oo badhkood yihiin Agoomo iyo Rajey micnaha aan hooyo iyo aabo laheyn waxay shalay ka nasteen kaalintii ku banaaneyd noloshooda. haddaba markii ay soo dhameysteen dalxiiskoodii iyo damaashaadkoodii waxa la geeyey guryahoodi iyagoo mafsuud wada ah.
Sawirkan Sare waa maalintii ciida iyo labada hablood, sawirka hoosana waa ka hor ciida
Caruurtan ayaanu dhamaantood wada qoraynaa dugsiyada lagu barto aqoonta qeybaheeda kala duwan gaar ahaan kuwa basaska lagu qaado waxaanu mar labaad ka codsaneynaa Dhamaan Muxsiniinta Muslimka ah iney ka soo kafaalo qaataan waxbarashadooda waayo maalin maanta aynu ugu baahi badannahay ayuu Alle sw inaga Abaal marin iyada oo qiimaha qofkiiba bishii noqonayo 40$ waa Dugsiyada gawaadhida caruurta lagu qaado ee ilaa cuntadooda leh. haddii aanu nahay bahda SdwO Madaxdeeda iyo Maamulkeedaba waxaanu si sharaf iyo qadarin leh ugu mahadcelineyaa cid kasta oo ka soo qeybqaadatey hawshan kheyriga ah iyadoo kii wax weyn hayey bixiyey kii inta ka yar hayeyna bixiyey Hargeisana waxaa qof muxsin ahi ka bxiyey $10.
Markaa waxaanu dhamaantiin Alle idinka baryeynaa danbi dhaaf iyo naxariis sidaas qiimaha leh ee aad Masaakiintaa ugu farxiseena Alle idinkaga farxiyo Jannadiisa Insha Allah. haddii aad haddaba rabto ama daneyneyso inaad caruurtaas Mustqabalkooda nololeed sii wado ka soo qeybgal waxbarashadooda. Haayada SDWO waxay balan qaadeysaa oo ay idin soo tabindoontaa in bishii Hal mar la dalxiis geyn doono Caruurtaas Sawiradoodana kala soco SDWO Insha Allah.
Waxaa dhawaan fooda inagu soo haysa Ciidi weyneyd ee Islaamka taas oo qof kastaaba culeyska saaro sidii uu uga farxin lahaa Awlaadiisa taas oo Waalid kastaaba u diyaariyo Caruurtiisa wax farxad galiya isla markaana dareenkooda wanaajiya.
Haddaba Maalintaas sidaa loo faraxsan yahay waxaa iyaguna murugeysan Awlaad aan haysan Waalidkood oo isugu jira Agoon Rajey iyo Danyar kuwaas oo dareemaya dareen dhib badan markay arkaan caruurihii kale ee facooda ahaa oo ku labisan labis aad u qurxoon
Haddaba annaga oo rabna inaaney Inkaartaas iyo Ishaasiba ku dhicin Umada Islaamka ah ayaa waxaanu Akhristayaashayada sharafta badan ka codsaneynaa iney Alle Dartii ugu farxiyaan Awlaadan si iyagana Alle ugagag Farxiyo Janadaiisa una Iibiyaan Dharka Ciida
Waxaanad kala xidhiidhi kartaan: Telfoonka ah 00252634366348
Oo ah Qof muxsin ah oo isku xilsaaray u adeegida Bulshada tabaaleysan
Nagana Filo Jawaab fiican oo ku farxad galisa Insha Allah
Sawirka sare waa waa wiil yar maalintii ciida iyo sawirka hoose oo ah ciidii ka hor
Sawirka sare waa wiil kale iyo maalintii ciida, sawirka hoosana waa ciidii ka hor
Halku dhiga SDWO Relief Project: Daawanaayoow waa dadkaagii, Daawanayoow waa dalkaagii
Hadii aad rabtid inaad SDWO aad ku soo hagaajisid sadaqadaada si aanu halkan ugu soo bandhigno sawirada marka la gudoonsiinayo deeqaha, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa samafal@sdwo.com
Guled Abdi Sheekhaash - SDWO & SomalilandNews.net Chief Editor